this is called step by step procedure.
Mar 31, 2008, 11:00:00 PM
good article! should blame to who for all these?
Mar 31, 2008, 11:07:00 PM
တပ်ထဲမှာတကယ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းရာတွေကိုရေးဖွဲ့ ထားတာ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ ကျားကြီးတော့ ခြေရာကြီး ၊ကြီးတဲ့သူက များများခိုး၊ သားခိုးထဲက ဓာမြပြန်တိုက် ကောင်းကောပေါ့ဗျာ သူတို့ အမွေရထားတဲ့ ပစ္စည်တွေများအောင့်မေ့နေကြသလားမသိ တကယ်သနားစရာကောင်းတာက လက်အောက်ငယ်သားစစ်သားတွေပေါ့ အိမ်မှာစားစရာမရှိ။ မရှိတော့ကြံရာမရ အကျင့်တွေပျက်ပြီးမလုပ်သင့်တာတွေလုပ်မိ ၊ ဒီအသိုင်းဝိုင်းထဲက မဟုတ်ပေမယ့် ထိတွေ့ နေထိုင်ခဲ့ရဖူးတော့ ကောင်း၂ကြီးသိပါတယ်။
တိတိကျကျ မြန်မြန်ဆန်ဆန် မှန်မှန်ကန်ကန်
မှားနေတယ် ဖြစ်မယ် ပြောင်းသင့်နေပြီးးး =)
တိုးတိုးကျိတ်ကျိတ်၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ခိုး ၊ မှန်တာကတော့ ဘာမှမရှိပါး ညာနေတာကြီး လူတကာသိး) ။
Mar 31, 2008, 11:20:00 PM
Apr 1, 2008, 1:56:00 AM
အဲဒီ လစာ၊ ရိက္ခာ လိမ်ထုတ်နေတဲ့ အကြောင်းတွေ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်လောက်ကတည်းက ကြားဘူးနေတာ။ အခုဆိုရင် ပိုဆိုးတော့မပေါ့။ ကိုစေးထူး တင်ပြပုံ ကောင်းလှသဗျာ။
Apr 1, 2008, 7:52:00 PM
တိတိကျ မှန်ကန် မြန်ဆန်ချင်သလား
good true story ....bro...
Apr 2, 2008, 2:39:00 AM
တပ်မတော် ရဲ့ အစဉ်အလာ မနက် တန်းစီ ပြီး အော်နေ ကြ ရဲဘော် ညာ ညှိ အမိန့်အတိုင်း အားလုံး ညာပြီး အချင်း ချင်း ညှိ ယူ နေကြ တာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ခဲ့ ပါပြီ။
Apr 4, 2008, 3:42:00 PM
Apr 9, 2008, 12:54:00 PM